Voatody ovy Fahatsapana zavakanto - hevitra ho an'ny trano sy zaridaina
10.05.2014 Navoakan'ny: Art Senses
Mandeha haingana, mora, mahafinaritra!, Hevitra ao an-trano, fomba fanamboarana
Ny ovy dia iray amin'ireo fanomezana culinary ho an'ny tontolo maoderina voaray avy amin'ny mponina taloha ao Andes. Ao an-tanindrazany, ireo perennials ireo dia asehon'ny karazana amina am-polony, endrika, loko ary tsiro izay hahagaga ny vahiny. Nentin'ny Spaniards tany Eropa izy ireo. Mitombo ao ambanin'ny tany, ny fanomezana voajanahary manontany tena be dia be amin'ny karbôgria ary misy proteinina, mineraly (indrindra ny potasioma) ary otrikaina, anisan'izany ny vitamina C. Androany, nandresy an'izao tontolo izao ny ovy, ary ilaina ny fisian'izy ireo isaky ny lakozia. Ilaina haingana sy mora vidy izy ireo. Izy ireo dia matsiro tsara ary na ao am-paty na voaendy. Na izany aza, ny hevitra ankehitriny dia natao ho an'ny ovy voatoto. Eto dia horesahintsika fotsiny ny mety ho fantsom-pifandraisana mety ho azo, fa ny fetran'ny fangaro tsiro dia afaka apetraka fotsiny amin'ny alàlan'ny eritreritra. Miaraka amin'ny hena, ny ronono, ny atody, ny vegetarian na ny kitapo alaina, ireto "paoma tany" (frantsay - "pomme de terre"; hebreo - תפוח) ה) dia samy tsotra ary siansa fisakafoanana mahafinaritra.
Ny vokatra ilaina dia ovy, fromazy, saosy, atody, persily, oliva, dibera, legioma ary zava-mahadomelina matsiro hafa ho anao.
Sasao tsara ianao dia andrahoy na andrahoina ny ovy, ka mitandrina mba tsy mandany hafanana. Miankina amin'ny karazana, habe sy ny hevitrao, azonao atao ny mamantatra izay hatao manaraka. Ho an'ny ovy lehibe, tetaho amin'ny antsasaky ary alao ny antsasaky. Andramo sy menaka miaraka amin'ny menaka matsiro na menaka oliva. Apetaho ao anaty lafaoro antonony ny fatotra. Azonao atao ny mampiasa ny zorony mitongilana toy ny sipa mihemotra rehefa manompo, na mampifangaro amin'ny kofehy sasany ary manendasa na atsotra amin'ny tenanao. Raha manana ovy kely ianao nefa mila atody ao anaty famenoana, azonao atao ny manasaraka ny atody. Ny proteinina dia afangaro amin'ny ampahany hamboed sy ny vokatra fanampiny, namboarina ary andrahoina ny henan'atody, ary atody miaraka amina ampahany ny voankazo.
Ny fomba iray hafa dia ny hanapaka ny sarony fotsiny. Rehefa mitrandraka ianao dia hahazo ny paosin-ovy voatokana izay azo amboarina. Amin'izany fomba izany dia afaka manasa lovia matsiro marobe ianao miaraka amin'ny fanomanana iray. Raha mikasa ny hampiasa hena na legioma mila fitsaboana lava ianao dia tsara raha manomana azy ireo mialoha. Ity hevitra ity dia safidy mety amin'ny fampiasana ireo vokatra kely izay tsy ampy ho an'ny famelomana tena.
hevitra, hevitra amin'ny ovy, ovy, ovy miaraka saosy, ovy misy menaka, ovy nopotsehina, ovy nopotsehina, ovy miaraka amin'ny fromazy sy atody, hevitra culinary, fakam-panahy culinary, vahaolana vahaolana amin'ny ovy miaraka amin'ny ovy, ovy, nopotehina ovy, voatsila dibera, fomba fahandro ho an'ny ovy, fomba fahandro amin'ny ovy, fomba fanamboarana, mijanona irery lovia, fitsaboana hafanana, hevitra ho an'ny tokantrano, famolavolana anatiny, furnishing, hevitra anatiny, hevitra famolavolana, trano maoderina, haingo hevitra, hevitra zavakanto
Boky milisy Milanese
Manolotra anao artista ary mora azo tanterahina ianao, na dia misy fanafody maro aza ...
Accent amin'ny floral ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Te handrehitra ny efitranonao ve ianao? Hanova ny fijeriny amin'ny vidiny lafo, miaraka kely kokoa ...
Manaova tenanao ho loharano vato
Ny loharano ao amin'ny zaridaina dia manana taratra manokana. Avy amin'ny toe-tsaina aristokratika amin'ny sary sokitra ...
Lohataona ririnina "Shanks"
Ny sakamalaho dia iray amin'ireo fanomezam-pahasoavana mamy indrindra amin'ny lohataona-fahavaratra. Mampiasa ...
Famoronana mofo artista Rainbow
Ny fanaovana mofomamy manaitra dia mazàna fahita sarotra izay mila traikefa ary ...
Ny Butchart Gardens (Butchart) dia vondrona mandrafitra voninkazo izay miavaka ...
Manaova tenanao fitoeran-jiro plastika
Ny hevitra narosony eto hoe ny fomba fanaovana fatana tavoahangy plastika dia ampitahao ...
Rindranty rindrin'ny varavarankely taloha
Ahoana ny fomba fofonaina fiainana faharoa ho vita amin'ny hazo vita fahiny amin'ny fanovana azy ho rindrina ...